Afghanistan:Kulanka dowladda iyo Taliban oo soo dhamaaday - BBC Somali
Afghanistan:Kulanka dowladda iyo Taliban oo soo dhamaaday
Saraakiishii ugu horeysay oo si rasmi ah u matalaysa dowladda Afghanistan, oo wadahadalada la gashay kooxda Taliban ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Kabul, waxa ay sheegeen in wadahadalada ay ahaayeen kuwa miradhal ah, ayna Taliban kulmayaan mar kale.
Kulankan ayaa waxa uu ku dhacay dalka Pakistan, kiisa labaadna waxaa la filayaa in uu ka dhaco Shiinaha.
Dhowr bilood oo ay wadahadala lahaayeen ayaa dowladda Afghanistan, waxa ay sheegeysaa in kulankaasi uu ahaa kii ugu horeeyay oo rasmi ah oo fool ka fool ay ula kulmeen kooxda Taliban.
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibada ee dalka Afghanistan, Hekmat Karzai, oo horkacayay ergayda dowladda, ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan oo wadhadalkan uu uga duwanaa kii hore in uu ahaa mid rasmi ah.
Waxa uu sidoo kale sheegay in hadda ay la xaajoonayaan dad loo igmaday in ay ka gorgortamaan hoggaaminta Taliban.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in ay u muuqatay in madasha ay joogeen wakiilo shabakada Xaqqani, oo ah koox xagjiriin ah oo fadhigoodu yahay dalka Pakistan, oo calaaqaad la leh Taliban.
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa wadahadalada waxa uga qeybgalay saraakiil, mid ka mid ah ergada Afghanistan waxa uu sheegay kulanka mustaqbalka dambe in maalinta Ciida kaddib, uu ka dhici doono dalka Shiinaha.
Waloow ay dowladda Afghanistan ay raja wanaagsan muujinayso, haddana waxaa jira fariimo laga helayo Taliban oo sheegaya in horta kulanka ay saraakiil rasmi ah uga qeybgaleen dhaqdhaqaaqa kooxdaasi oo dhan iyo in kale.